अर्को १० वर्षमा हामी बिकसित बिमामा गइसकेका हुन्छौँ। – Beema Khabar
Home›बीमा अनुसन्धान›अर्को १० वर्षमा हामी बिकसित बिमामा गइसकेका हुन्छौँ।
बिमा सबैका लागि अत्यावश्यक छ। सात दशक लामो इतिहास रहेको बिमा क्षेत्रको प्रवेश दर ११% मात्र पुगेको छ भने सँगसँगै सुरुवात भएको बैंकिङको प्रवेश दर भने ५०% पुगिसकेको छ। बिमा क्षेत्रको बिकास नहुनुमा सर्वसाधारणमाझ यससम्बन्धी जनचेतनाको कमीलाई मान्ने गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा पाँच दशक भन्दा लामो समयसम्म बिमा क्षेत्रलाई नै कार्य क्षेत्र बनाएका र हालसम्म पनि कार्यरत बिमा बिज्ञ, भोजराज शर्मा सँग बिमा खबरले गरेको कुराकानी:
१. तपाईंले नेपालमा बिमाको बिकास क्रमलाई कसरी नियाल्नु भएको छ?
नेपालमा बिमाको बिकास भएको करीब ७० वर्ष भयो। व्यवसायिक रुपमा बिमाको सुरुवात राणाकालमा बिराटनगर जुट मिल, जुद्द म्याच फ्याक्ट्री जस्ता उध्योगहरु सन्चालनमा आएपछी भएको हो। यसले व्यापारका गतिवीधीमा बृदि गरायो। ब्रिटिशकालदेखी नै बिमामा सकृय भारतीयहरु नेपालमा पनि बिमाको क्षेत्र रहेको महसुस गरेर व्यवसाय र वाणिज्य भएका ठाउँहरुमा अभिकर्ताका रुपमा आएर बिमा गराउन सुरु गरे। यसरी नेपालमा बिमाको चेतना जाग्रित भयो।
त्यसै बखत नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो। मालसामानको ढुवानी र धितोको बिमा गराउन बिमा कम्पनीको आवश्यकता महसुस गरियो। २००४ सालमा ‘नेपाल मालचलानी तथा बिमा कम्पनी’ भन्ने संस्था स्थापना भयो। यसका साथसाथै सम्पत्ति बृदि, गाडीको आयात बढ्यो,उध्योग व्यापारका गतिविधी फैलिए र बिमाको महत्वका बारेमा जनताहरुमाझ चेतना पनि बढ्यो। भारतीय बिमा कम्पनीहरुले शाखाहरु खोलेर नेपालमा निर्जीवन बिमासम्बन्धी काम गर्न थाले। भारतकै एलआइसी कम्पनीले जीवन बिमा सम्बन्धी कार्यको थालनी गर्‍यो। यस कम्पनीको बिमासम्बन्धीको प्रचार्-प्रसार गर्नमा ठुलो योगदान रहेको छ।एलआइसीले बिमाको पर्यायको रुपमै आफुलाई स्थापना गर्‍यो।
२०२४ सालमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान प्रा.ली.को सुरुवात भयो। यही कम्पनी २०२५ मा राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐनमा परीणत भएर आफ्नो गती लियो र धेरै समयसम्म अखन्ड रुपमा काम गर्‍यो। २०२९ सालमै राष्ट्रिय बिमा संस्थानले जीवन बीमा पनि सुरु गर्‍यो।
बिमा कम्पनीहरुलाई दर्ता गरी व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्नका लागि २०२५ मै बिमा समिती ऐन अन्तर्गत बिमा समितिको स्थापना भयो। वि.स. २०४४ सालतिर बिमा व्यवसाय गर्ने निजी स्तरको कम्पनीको रुपमा नेसनल लाईफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मात्र स्थापना भएको थियो।
२०४६ सालको दशकपछी प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीसँगै नेपाल सरकारले अपनाएको आर्थिक उदारीकरणको फलस्वरुप बिमा क्षेत्र पनि निजिस्तरका लागि खुल्ला भइ अहिलेको अवस्थामा पुग्यो।
हाल बिमा बजारमा १८ वटा जीवन बिमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बिमा र एउटा पुनर्बिमा कम्पनी सन्चालनमा छन्।
२. बिमा क्षेत्र सोचेजती विस्तारित भएको पाइँदैन नि। बिमाको जनतामा पुगेको पेनिट्रेसन रेट (प्रवेश दर)लाई कसरी हेर्नु भएको छ?
बिमाले जनतामाझ सोचेजती प्रवेश गर्न सकेको छैन। हालको बिमाको प्रवेश दर करिब ११% पुगेको छ। बिमाको बिकास त भएको मान्न सकिन्छ किनभने बिमा कम्पनीको पुँजी हाल करोडबाट अर्ब पुगेको छ। अहिले बिमा कम्पनीहरुको ७३ अर्बको बिमा प्रिमियम सन्कलन रहेको छ। करीब ८ हजार मनिसहरुले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन। अप्रत्यक्ष रुपमा अभिकर्ताका रुपमा पनि रोजगारी सिर्जना भएको देख्न सकिन्छ।
व्यक्तिले चाहेर पनि, भौगोलिक परिस्थिती राम्रो भएर पनि , राजनैतीक अवस्था राम्रो भएर पनि तुरुन्तै बिमा क्षेत्र बिकास हुन सक्दैन। बिमा भनेको व्यक्तिको आर्थिक अवस्था र प्रती व्यक्ती आयसँग सम्बन्धित छ। मानिसले आफ्ना आधारभुत आवश्यकताहरु पुर्ती भएपश्चात मात्रै भविष्यको लागि सुरक्षा खोज्छ। तर नेपालको प्रती व्यक्ती आय असन्तोषजनक रहेको छ।
तसर्थ, मानिसको आर्थिक अवस्था सबल नहुन्जेल उसले भविष्यका लागी बचत गर्न सक्दैन। यसका साथसाथै बिमा कम्पनीहरुको पनि जनचेतना जगाउनमा कम लगाव देखिएकाले सोचेजतिको बिमाको प्रवेश दर नभएको हो।
३. बिमाले अर्थतन्त्रलाई कस्तो योगदान दिएको छ?
बिमाको नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको २.५% योगदान रहेको छ।
४. सँगसँगैको बिकासक्रमको इतिहास बोकेको बैंकिङ क्षेत्रको पेनिट्रेसन रेट ५०% पुगिसक्दा बिमा क्षेत्रको बिकास सन्तुष्टी जनक भएको पाइँदैन नि। यस क्षेत्रको बिकास नहुनु पछाडि के–कस्ता कारण पाउनु हुन्छ?
तत्त्कालको अवस्थामा भौगोलिक विकटता र यातायातको कठिनाइहरुलाई बिमाको बिकास नहुनु पछाडिको कारण मान्न सकिन्छ। बिमा कम्पनीहरु शहर केन्द्रित भएर आफ्ना कार्य सन्चालन गर्नु पनि यसको अर्को कारण हो। ग्रामीण भेगमा बिमाको प्रचार-प्रसार भएको पाइँदैन। गाउँ घरमा कृषिबाट आएको र विप्रेषणको पैसालाई लघु बिमाका रुपमा बचत गर्न बिमा कम्पनीहरु सकृय हुनु पर्छ।
५. अभिकर्ता पेसालाई नकारात्मक रुपमा हेरिएको पाइन्छ। नेपालमा अभिकर्ता पेसालाई मर्यादित बनाइ गुणस्तर बढाउन के–कस्ता कदम चाल्नु पर्ला?
अभिकर्ता नै बिमाका मेरुदण्ड हुन। उनीहरुलाई मर्यादित बनाउन क्षमता बिकास गर्नुपर्छ। यसका लागि उनीहरुलाई विस्तारित तालिमको आवश्यकता हुन्छ। उनीहरुलाई बिमासम्बन्धी स्पष्ट र विस्तारित ज्ञान हुन जरुरी हुन्छ किनभने उनीहरुले नै सर्वसाधारणहरुलाई बिमा सम्बन्धी बुझाएर बिमा गर्न लगाउने हुन्।
अभिकर्ताहरुको पाठ्यक्रम पुनर्जाँच गरिनुका साथ साथै अद्यावधिक हुनुपर्छ। आचरणको कोड हरुलाई पनि कडाइका साथ पालना गराइनु पर्छ। मिस्सेल्लिङ रोक्नका लागि अभिकर्ता बिमासम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान भएको र जवाफदेही हुनु पर्छ। प्राविधिक बिमामा उच्च शिक्षीत अभिकर्ताहरुलाई छनोट गरिनु पर्छ।
६. बिमालाई बिस्तार गरी समावेसी बनाउनका लागि बिमा समितिका भविष्यका योजनाहरु के–कस्ता छन?
मध्य पहाडी राजमार्गले सुगमता बढाउँछ। विप्रेषण, व्यवसायिक कृषि र अन्य रोजगारीले गर्दा आमदानी बढेको छ। क्रमिक बिकास गर्न असक्षम बिमा क्षेत्रले अब द्रुत बिकासमा जोड दिनु पर्ने छ। अर्को १० वर्षमा हामी बिकसित बिमामा गइसकेका हुन्छौँ।
हामी बिमालाई व्यापक रुपमा जनतासामु पुर्याउने प्रयास गर्दै छौँ। प्रत्येक प्रदेशमा त्यहाँका सरोकारवाला निकायहरुमाझ बिमाको बारेमा सचेतना जगाइ आफ्नो क्षेत्रमा बिमा बिस्तार गर्न उत्प्रेरित गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयहरुमा गइ बालबालिकाहरुलाई बिमाको महत्वका बारेमा छर्लङ पार्ने जसकारण उनीहरुले आफ्ना अभिभावकहरुलाई बिमा गराउन भनी घच्घच्याउँछन। बिमा शिक्षाका लागि बिमालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै समेट्ने कुरामा पनि कार्यहरु अगाडि बढ्दै छन।
यसका साथसाथै बिमा पेशामा गुणस्तर र बिमितलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न अभिकर्ताहरुमा क्षमता बिकासको खाँचो छ। उनीहरुलाई तालिम दिनका लागि ‘बिमा इन्स्टिट्युट नेपाल’ भनेर संस्था खोलिएको छ। अत;बिमा क्षेत्रको पँहुच बढ्दै छ। हामीले सकारात्मक भइ बिमाको जनचेतना जगाउन जरुरी छ।
नेपाल बंगलादेश बैंक र आइएमई लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकस्योरेन्स सम्झौता